Pakistana: Fanehoankevitra Noho Ny Fahafatesan’i Osama Bin Laden · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2011 14:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, srpski, Nederlands, Ελληνικά, polski, English
Ny 01 May nanodidina ny tamin'ny 10 alina no nanambarana fa hanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika olana lehibe iray ny Filoha Obama. Raha mbola teo ampiandrasana ny ho fisehoan'i Obama izao tontolo izao dia efa rakotra bitsika maminany ny mety ho lazainy kosa tao amin'ny Twitter. Minitra vitsy taorian'izay dia nandefa bitsika i Keith Urbahn, talen'ny kabinetran'i Donald Rumsfeld, fa ny lehiben'ny Al Qaeda, ny mpampihorohoro fara-tampony Osama Bin Laden dia maty ary nanomboka nanapaingotra an'izay vaovao izay daholo ny mpampahalala vaovao rehetra. Tsy ela ny tontolon'ny twitter dia nanomboka nipoaka noho ireo bitsika avy amin'izao tontolo izao.
Fa vao niposaka io andro io dia Pakistane iray no nandefa bitsika avy any Abbottabad, @ReallyVirtual, nandrakitra fotoana sasantsasany nandritra ilay fanafihana tao anatin'ny bitsika nalefany.
@Reallyvirtual: Angidimby mijijy eo ambonin'i Abbottabad amin'ny 1 ora maraina (tranga tsy fahita firy).
Sary Google Maps
Tao anatinà fanafihana notarihan'ny sampam-pitsikilovana, vao maraina be tamin'io maraina io no maty i Osama Bin Ladin tao an-tanànan'i Abbotabad, 80 kms miala an'i Islamabad renivohitra. Araka ny fanambaràana iray navoakan'ny biraon'ny raharaham-bahiny ao Pakistan:
Teo ambany fitarihan'ny tafika Amerikana ny fanafihana, mifanaraka amin'ny politika nambaran'i Etazonia fa hoe tsy maintsy ho fongotra ao anatin'ny hetsika mivantana ataon'ny tafika Amerikana i Osama bin Ladin, na aiza na aiza ahitana azy eto amin'izao tontolo izao.
Manambara ny tatitra fa voatifitra teo amin'ny loha i Osama nandritra ny firotsahana an-tsehatra nataon'ireo angidimby Amerikana tamin'ny fanafihana ny toeram-pamaharany tao Abottabad. Ny fanehoankevitra voalohany avy amin'ireo Pakistane tao amin'ny twitter dia nanomboka niraradraraka rehefa nandeha ny fanafihana.
Nanomboka nitatitra koa ireo fantsom-baovao fa hoe nisy angidimby iray nianjera tany akaikin'ny akademia miaramilan'i Kakol izay lazain-dry zareo ho tany malalaka tsy misy n'inon'inona. Mapndefa bitsika iray no mikiaka ny hoe:
@Mosharrafzaidi: Angidimby nianjera tany akaikin'i PMA Kakul. Inona no tokony hisidintsidinan'ny angidimby iray manodidina an'i Abottabad Cantt amin'ny 01 ora 30 maraina?
@Reallyvirtual: ity ny faritra nisy ilay fianjerana tao Abbottabad araka ny filazan'ny olona sasany >>> http://on.fb.me/khjf34
Vantany vao nivoaka ilay vaovao dia nanomboka nandefa tatitra sy fandalinana momba ny fahafatesan'i Bin Laden sy ny mety ho vokany ireo fantsom-baovao.
@kursed: Araka ny nolazain'ny manampahefana Pakistane dia nitsidika an'i Etazonia i Shuja Pasha tamin'ny 11 Aprily, ho fandaminana farany ny antsipirihan-javatra momba ny fanafihana an'i #OBL.
@kursed: Indray mandeha indray, araka ny loharanom-baovao pakistane, angidimby niainga avy any Ghazi AB (Tarbela). fitambarany angidimby 6 .
@Mahamali05: Oooay. sambany nampiasa ny teny hoe ‘Shaheed’ hitenenany an'i Laden ilay mpanao gazety Javed Ch. mananihany ahy ve nareo izany
@sharmeenochinoy: ny fantsom-baovao ao #pakistan dia tokony hatsahatra raha mihevitra marina an'i #OsamaBinLaden ho maritiora- mpampihorohoro izy, ary antsoy hoe biby ny biby
@akchisti: na iza na iza miantso an'i #OBL ho maritiora dia tokony hosaziana araka ny andalana fahA-6, “famadihana tanindrazana” ao #Pakistan
Hatreto dia tsy mbola nisy fanambaràna ofisialy avy amin'ny ISPOR na ny governemanta mikasika ny antsipirihany mikasika ilay fanafihana. Haingana be kosa ny fidiran'ny Filoha Obama tamin'io ary efa nanambara sahady fa nahitam-bokany sy nahatratra ny tanjony ny fanafihana iray notarihan'ny tafika Amerikana. Ny fahafatesana na ny fisamborana an'i Bin Laden no laharam-pahamehana ho an'ny governemanta Amerikana.
@Kursed: Dia tsy azoko mihitsy hoe fa maninona na ny ISPR sy ny Gov. ao Pakistana no tsy misy misoka-bava ho setrin'ity tranga ity hatramin'izao. Hadalàna bevava izany ankehitriny.
@Zalmay Zia: ISPR niteny tamin'ny ankolafy rehetra, media, mpandalina mba tsy ho be resaka haneho hevitra momba ny fisamborana an'i #obl raha tsy efa mahazo teny avy amin'ny ISPR
@Mustafa_Qadri: noho ny tahotra valifaty dia tsy sahy miteny ny anjara lehibe noraisiny tamin'ny famonoana an'i Osama ny tafika Pakistane
Ahsan Butt ao amin'ny Five Rupees dia nizara ny fomba fiheviny avy hatrany ny fahafatesan'i Bin laden, mamaly fanontaniana lehibe maromaro sy izay mety ho vokany
“Ho an'ireo P§akistane, midika fanaovana asa vy very ny aina indray io. Isak'izay ambara fa hoe nisy “fahombiazana” hita tamin'ity ady ity, nanomboka tamin'ny “fanafahana” an'i Lal Masjid ka hatramin'ny namonoana an'i Baitullah Mehsud, dia nirongatra foana ny herisetra, satria tian'ireo tarika mitam-piadiana hampahatsiahivina ny tsirairay fa mbola misy ry zareo ary mandehandeha eny rehetra eny. Tsy misy antony tokony hanantenako fa hoe mety hiova izany lalan-kevitra izany.”
@sharmeenochinoy: Vao avy nametraka indrindra ny telefaona nifandraisako tamin'ny olom-pantatra any #madrassa, fikarakarana fisaonana lehibe ho azy no omanina, handoa betsaka amin'io i #Pakistan
(Google map misy ny toerana namaharan'i Laden avy amin'ny thepunit)
Kalsoom at CHUP- Changing Up Pakistan dia manana ireto fanontaniana ireto:
Nanakaiky koa ny akademian'ny tafika Pakistane ilay toerana, izay no mahatonga ny fanontaniana, tena ao amin'ilay faritra ve no miafina i bin Laden satria andry iray ho an'ny ISI izy? Sa fantatry ny tafika Pakistane fa tao izy ary dia nanampy ny tafika Amerikana mba hanara-maso ny fisiany tao ry zareo? Fantatry ny Pakistane ve hoe fantatry ny Amerikana fa efa nahafantatra ry zareo? Tsy mety tapitra ny fanontaniana sy ny sahoan-dresaka samihafa.
Midika fandresena goavana ny fahafatesan'i Bin Laden ho an'ny ady amin'ny horohoro nefa ny ho vokany sy ny gidraka mety hisy ao Pakistana no atahorana. Ny mpandalina sasany ao Pakistana dia nandeha lavitra hatramin'ny filazana fa tokony hamarana tanteraka ny adiny amin'ny mpampihorohoro i Etazonia. Amin'ny tsy fijerena ny hoe ny Al-Qaeda dia tsy tafika tantanin'olon-tokana velively ary maro amin'ireo sampan'ny tarika ao aminy no nofanina sy mbola amperinasa amin'izao fotoana. Ny filazana sahady fa hoe tapitra ny ady amin'ny horohoro dia maneho tsy fahamalinana.
Sahala amin'izay tena hanehoan'i Ahsan & Chinoy azy amin'ny fomba mahitsy dia be ireo Pakistane no hizaka ny vokany raha mihetsika noho io vaovao io ireo tarika mpihoko. Be ihany koa ny fanontaniana ilàm-baliny, saingy zavatra tokana no tena efa azo antoka dia ny tahotra ny fiantraikany taorian'ny fahafatesan'i Bin Laden no tena misy eo amin'ny vahoaka, tsy ao abbotabad fotsiny ihany fa manerana an'i Pakistana.
@Mehreenkasana: Manova zavatra ve izao? Ho an'i Afghanistan, Pakistan? Hampitsahatra ireo zava-doza tsy nisy toa azy nateraky ny fanafihan'ireo drones ve ? Tsia, tsia ary tsia.